Wararka - Warshaddeena ayaa kaqeyb gali doonta Showga: WORLD OF CONCRETE ASIA sanadka 2020-12-09
World of la taaban karo waxaa la aasaasay sanadkii 1975. Ka dib in ka badan 40 sano oo ah raasamaal iyo horumarin, WOC waxay noqotay bandhig xirfadeed oo loogu talagalay ganacsiga caalamiga ah ee la taaban karo iyo warshadaha duugga ah, summaddeeduna waxay ku fidday Mareykanka, Shiinaha, Mexico, Canada, France iyo Hindiya.
Bishii Nofeembar 2016, sumadda caanka ah ee carwadda "la taaban karo ee World Expo" ayaa lagu soo bandhigay Shiinaha. Isla mar ahaantaana, qaybaha xirfadaha kala duwan ee bandhigga Las Vegas ayaa la soo saaray, oo ay ku jiraan qaybaha bandhigga asalka ah ee "Shanghai International Flooring Industry Exhibition", "Shanghai International mortar technology and qalabka exhibition" iyo "Shanghai International sports ground Exhibition".
Tiknoolajiyada cusub, shubka iyo tiknoolajiyada kale ee la taaban karo ayaa lagu soo bandhigi doonaa Aasiya. Isla mar ahaantaana, wuxuu bilaabay Machadka Aasaasiga ah ee Aasiya, Shirka isdhaafsiga tikniyoolajiyadda Aasiya, shirarka shirarka warshadaha dhismaha ee Aasiya, xafladda abaalmarinta trowel dahabka Aasiya, kulanka wadaagga mashruuca biraha dahabiga Aasiya, madasha horumarinta suuq geynta wadarta, qaab dhismeedka iskudhafka shirarka, shirarka iyo shirarka, si loo sahamiyo wadada horumarka mustaqbalka ee dhismaha dhismaha oo lala yeesho warshadaha Aasiya iyo gobolka Baasifigga.
Waqtiga boostada: Dec-07-2020
Hex handarraabbadeedii, Lag Bolts, Gawaarida Gawaarida, Qaab dhismeedka, U Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah,